Madagascar : Nihemotra ny kalitaon’ny zotra 194 | ONG Lalana Blog
Madagascar : Nihemotra ny kalitaon’ny zotra 194
Lasa mametraka seza afovoany ireo taksibe amin’ny zotra 194 ao amin’ny kaoperativa Mirindra ankehitriny
Miharatsy ny asa sy ny fitaovana ampiasain’ny zotra 194 ankehitriny. Lasa kivy manoloana izany ireo mpanjifa mpandeha aminy.
Nanary ny maha-izy azy. Tsy misy mpiasa manokana manara-maso in-tsony ny asa fitaterana eny an-dàlana ho an’ny zotra 194 mampitohy an’Andranomena sy Mausolée, ary Andrano­mena sy Saropody ao amin’ny kaoperativa Mirindra ankehitriny. Lasa mamelatra seza afovoany ihany koa ity zotra ity. Kivy manoloana izany ireo mpanjifa izay mampiasa io fitaterana io isan’andro, ary lasa diso fanantenana tanteraka.
« Nindrahindraina ho isan’ ny zotra nanara-penitra hatramin’izay ny zotra 194 sy ny kaoperativa misy azy. Mifano­hitra tanteraka amin’izany anefa ny zava-misy tato ho ato. Ny fanajana mpandeha aloha iny mbola mitoetra fa ny kalitaon’ny asa sy ny endriky ny fiara ao anatiny no ahitana lesoka. Sady rovitra sy tsy misy fiankinana mantsy ny seza sasany ao anatin’ny fiara, no lasa mametraka seza afovoany izy ireo. Ireo mpanaramaso ny asa eny an-dàlana koa tsy hita izay nalehany efa ela izay », hoy ny fanamarihana nataon-dRamaronantenaina Miora, isan’ireo mpanjifa io zotra io isan’andro.
« Fanararaotana ataon’ireo mpamily sy ny mpanampy azy ny fametrahana seza afovoany ao anatin’ny fiara, fa tsy fepetra manokana noraisina teo anivon’ny kaoperativa. Naato kely ho fijerena sy fanovàna ny fomba fiasa, mba hahatsara ny kalitaon’ny asa mantsy, ireo olona nokaramaina manokana hanaramaso ny asan’izy ireo, ka izay no mahatonga azy ireo manao izay danin’ny kibony. Tsy maintsy handraisana fepetra anefa izy ireo, satria manaratsy endrika ny kaoperativa sy manala baraka ireo mpiara-miasa aminy », hoy kosa ny fanamarihana nentin-dRandria­narisoa Lanto, filohan’ny kaoperativa Mirindra misy ny zotra 194.
Fifaninana tsy voafehy
« Mbola tsy naharay tatitra ofisialy mahakasika izany fiovan’ny fomba fiasa eo anivon’ny kaoperativa Mirindra izany izahay. Mety ho fanapahan-kevitra anatin’io kaoperativa io ihany koa izany raha misy. Na izany na tsy izany, dia mety ho avy amin’ny tsy fahafehezan’izy ireo ny fifaninana misy toy ny fandraisana na tsia ny saran-dàlana 200 ariary, na ny tsy fifanarahan’ny tolotra sy ny tinady no antony nahatonga azy ireo nanao izany fanovàna fomba fiasa izany », raha ny voalazan’ Andriambinintsolomora Bernardin, filohan’ny UCTU.
Nanamarika ny mahamety io fametrahana seza afovoany amin’ny zotra 194 io kosa ireo mpanjifa sasany. « Tsy maharaka ny isan’ireo mpandeha ireo fiara miasa satria vetivety dia feno. Mba voatsinjo amin’
ilay fametrahana seza afovoany ataon’izy ireo anefa ireo olona sasany maika hamonjy fotoana », raha ny fanehoan-kevitra nataon-dRamaromisa Luc, isan’ireo mankasitraka ny fametrahan’ireo fiara sasany amin’ny zotra 194 seza afovoany.